Broken heart (အသဲကွဲခြင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » Broken heart (အသဲကွဲခြင်း)
Broken heart (အသဲကွဲခြင်း)
Posted by si tone on Sep 1, 2012 in Arts & Humanities, Creative Writing, Drama, Essays.., How To.. | 19 comments
Si Tone ပြောတဲ့ အသဲကွဲခြင်းအကြောင်း အားပေးပါနော်...
ကဲ…… သူငယ်ချင်းတို့ အသဲကွဲဖူးကြလား……. Si Tone တော့ အသဲကွဲဖူးပါတယ်……
စိတ်တော့မဆိုးကြနဲ့နော်… Si Tone ရေးတဲ့စာတွေမှာအမှားပါရင်…. Si Tone ကိုခွင့်လွှတ်ကျပါနော်….
Si Tone ထင်တယ်…. လူကောင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် အသဲတစ်ခါတော့ကွဲဖူးရတယ်…. Si Tone ဆိုလိုတဲ့
သဘောက လူကောင်းဆိုတာ အချစ်နယ်ထဲကိုရောက်ဖူးတဲ့ သူကို ဆိုလိုတာပါ….. အင်…. Si Tone အထင်.
ယောင်္ကျာလေးတွေ အများစုက အသဲခွဲနေကြတာများတယ်….. အသဲကွဲဖူးတာနည်းတယ်…..
အသဲကွဲပီးဆိုရင်လဲ မိန်းကလေးတွေထက် ပိုဆိုးတယ်…ယောင်္ကျားလေးတွေက အစွဲအလန်းပိုကြီးကြတယ်..
ချစ်ပီးဆိုရင်လဲ သူဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးရွာပါစေ နောက်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်… တချို့ မိန်းကလေးတွေက
ပြောတယ် ယောင်္ကျားတွေကမကောင်းဘူးလို့…. “ဘာလို့လဲလို့” Si Tone မေးရင် မိန်ကလေးတွေကို
အသဲခွဲကြလိုဆိုပီး……. အဲဒါမှားတာပဲ…. ဒါယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
မိန်ကလေးနဲ့ ယောင်္ကျားလေးနဲ့ ချစ်သူရည်စားဖြစ်ရင် မိန်ကလေးတွေရဲ့ စိုက်ကို က “ သူ့ ကိုစိတ်မချ
တာနဲ့ စိတ်ပူတာနဲ့ မယုံကြည်တာနဲ့ ” …… အဲဒီစိတ်တွေများနေတာကကို မှားနေတာ… စိတ်မချတာ
မဟုတ်ဘူး စိတ်ချပါ စိတ်ချသင့်တဲ့နေရာမှာ စိတ်ချပါ ၊ စိတ်မပူနဲ့ မဟုတ်ဘူး စိတ်ပူပါ စိတ်ပူသင့်တဲ့
နေရာမှာ စိတ်ပူပါ၊ မယုံကြည်ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး ယုံကြည်သင့်တဲ့နေရာမှာ ယုံကြည်ပါ…. အဲဒါမှ
ဒီလိုပဲ မိန်းကလေးတွေကျတော့ အသဲကွဲဖူးတာများပါတယ်… ယောင်္ကျားလေးဦးရေထက်
အသဲကွဲဖူးတဲ့မိန်းကလေးဦးရေက ပိုများပါတယ် ယောင်္ကျားလေးတွေက မာယာများတဲ့
မိန်းမတွေ မာနကြီးတဲ့မိန်းမတွေဆိုရင် ပုပ်ခက်ကြတယ်… အဲဒါမှားတယ်…. အဲဒီမိန်းကလေး
တွေက အသဲကွဲဖူးကြလို့ သူတို့စိတ်နဲ့ သူတို့ထိမ်းနေကြတာ… မိန်းကလေးတွေ အသဲကွဲကြရင်
မျက်ရည်ကျတက်ပါတယ်….. တကယ်ဆိုလဲ မျက်ရည်ကျသင့်ပါတယ်။ မျက်ရည်ကို မထိမ်းပါနဲ့
ထိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်ကို မထိမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Si Tone တစ်ခုပြောပြမယ်..
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ အသဲကွဲဖူးတ.်ဆိုရင် ပိုပြီး ဦးနှောက်က စဉ်စားတက်လာပြီး
အပြောအဆိ်ု အနေအထိုင်လဲ တက်လာပါတယ်…. မိန်းမ ပီးတ လာတယ်လိုပြောရမယ်..
“ အသဲကွဲဖူးတဲ့ မိန်းမတစ်ဦးရဲ့ ဦးနောက်ဟာ… လှည့်စားတက်တဲ့ ယောင်္ကျား ၁၀ ဦးရဲ့
ဦးနောက်ထက် စဉ်စားတက်တယ်…..” တဲ့…….
ဒါနဲ့တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေကလည်း အသဲခွဲတက်ကြပါတယ်….. သူတို့ အသဲခွဲပီးဆိုရင် ယောင်္ကျားလေး
တွေ အကွပ်ကျကျ စနစ်ကျကျ စဉ်စားပီးမှ အသဲခွဲတက်ကြပါတယ်…. မိန်းကလေးတွေ အသဲခွဲလိုက်ပီးဆိုရင်
ခံစားရတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေ တော်တော်များပါတယ်…. ………….
ကယ်……. Si Tone က အသဲကွဲခြင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲံ ပက်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို Si Tone
သိသလောက် မှတ်သလောက် ရေးထားပါတယ်…. ဒါပေမဲ့ အသဲကွဲတာလဲ မကောင်းပါဘူး အသဲခွဲတာလဲ
မကောင်းပါဘူး… လှည့်စားတာလဲ မကောင်းပါဘူး… မလုပ်ကြနဲ့နော်…………….. ဟီးဟီး….
Si Tone ရဲ့ အသဲကွဲခြင်းနဲ့ ပက်သက်ပီး အားပေးကြပါနော်… အကဲလဲခပ်ပေးပါနော်…..
ဟိုက် လူကောင်းဖြစ်ချင်လို့ မြန်မြန် အသဲခွဲပေးကြပါဗျို့ ….. :grin:
မိန်းမဆိုတဲ့ အမျိုးက အချစ်ကို တန်ဖိုးဖြတ်တဲ့နေရာမှာ အတော်ဆုံး…အချစ်ကို သူတို့ဘ၀တွေ၊ အနာဂတ်တွေ၊ ပျှော်၇ွင်မှုတွေ၊ ငွေကြေးတွေ၊ မိသားစု အရေးဆိုတာတွေနဲ့ လဲပြီး တန်ဖိုးဖြတ်တတ်ကြတယ်။(မချစ်တဲ့ သူတောင် လက်ခံနိုင်ကြတယ်..အကုန်လုံးကိုမပြောလိုပါ..အများစုကပေါ့)
ယောက်ကျားလေးတွေကတော့ အချစ်ကို ခုတုံးလုပ်တဲ့နေရာမှာ အတော်ဆုံး။ လက်ကလေးကိုင်လဲ ချစ်လို့ပါ၊ ပါးခုံလေးဖက်လဲချစ်လို့ပါ၊ ဘာဖြစ်ဖြစ် ချစ်လို့ပါဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့ပဲ …။
ဒါကြောင့် ..ဘယ်သူ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမှ မလွန်သလို၊ ဘယ်သူမှ မမှားပါဘူးဆိုတာ ပြောရင်း………..
ယောက်ျားစာရင်းထဲ အနော် ပါလေမလားဘဲ ..
အသက်အရွယ် ခပ်ငယ်ငယ်မှာဆို မကောင်းဘူး ထင်တာပဲ ..
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရူးမိုက်မိုက်နဲ့ ထင်ရာစိုင်းသွားတတ်လို့ပါ ..
ဒီလို အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး
တစ်ခါတစ်ခါ ကျုပ်တော့ဖြင့် ရွာထဲက အာပျိုဂျီးဒွေဂို ချီးကျူးမိသဗျာ …
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူ့ရို့ကို ကံကောင်းတယ် ထင်လို့ပါ ..
ကြိုက်သူ မရှိလို့ မရဂျတာ ဆိုရင်တော့ သိဘူးပေါ့ …
“The course of true love never run smooth”
အချစ်စစ်၊ အချစ်မှန်တို့ရဲ့ လမ်းဟာ
ယေဘုယျအားဖြင့် ဖြောင့်တန်းခြင်း မရှိလို့ ဆိုရမှာပေါ့နော် ..
ဒီလို အဖြစ်မျိုးမှာဆို နှစ်ဖက်လုံး အသည်းကွဲတာပဲ ..
double side လို့ ပြောရင် ရမလားပဲ …
သည်ခေတ်ကြီးထဲ ရည်းစားပစ်သွားလို့ အသဲကွဲတယ်လို့ ကြေငြာနေရင်တော့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းသလိုသာ ရှိချေလိမ့်မည်။ သမီးရည်းစားကဏ္ဍတွေက ခေတ်အရမ်းလွန်နေတာကို လူတိုင်းသိကြသည်။
ခေတ်လွန်မိန်းကလေးတွေ များနေပေမယ့်လည်း ကိုယ့်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့ မိန်းမကောင်း အပျိုစင်တွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ အသည်းကွဲတယ်ဆိုတာ ရည်းစားပစ်မှ ကွဲတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ချစ်နေတဲ့သူက တစ်ခြားတစ်ယောက်ကို ချစ်မိသွားရင်လည်း အသည်းကွဲတတ်ကြတာပါပဲ။ အသည်းကွဲတယ်လို့ ကြေညာတာနဲ့ ကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းတာနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့တော့ ထင်တာပါပဲ။
ဟာ………….. Si Tone ကုသပေးမယ်လေး……………….
အသည်းကွဲရင် လူကဘယ်လိုကြီးဖြစ်သွားတာလဲ … မစားနိုင်မသောက်နိုင်လိုမျိုးလား …
အသည်းကွဲတော့ကွဲဖူးကြည့်ချင်တယ် … ကြောက်တယ်
ဂေါင်ဇူးလေး စီတုံးဆိုတဲ့သတ္တဝါ ခေါ်ရင်ပြန်မထူးနဲ့နော်၊ ချိန်းရင်လည်း ဘယ်တော့မှ မသွားလေနဲ့… အင်ဆိုပေမဲ့ အွန်ဂျီးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊ လောကဂျီးမှာ ဦးကြောင်ကလွဲ အားလုံးငမွဲကြီးပဲမှတ်….။
အသည်း ဆိုတော.. အင်္ဂလိပ်လို.. Liver ဖြစ်ပြီ..
နှလုံးဆိုတာ.. Heart အင်္ဂလိပ်လို.. ဖြစ်တာလေးသတိထားပါနော…
ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်ရင်.. ဒို့မြန်မာတွေ.. စကားမကြွယ်တာ.. အရမ်းသိသာလာတာပဲ..
ကိုယ့်အမျိုးမို့.. ပြောရတာ..” နှလုံးနာ”တယ်..။
ဒါပေမယ့်.. ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းရတာမို့.. “အသည်းမာ”မှဖြစ်မယ်..
အသည်းမာရင် စားလို့ မကောင်းဘူး။
“အို ကျုပ်အသဲကတော့ မာလိုက်တာမှ ဒင် ဒင် နဲ့တောင်မြည်နေသေးတယ်”
ညီမကို ထားမသွားပါနဲ့ အကိုရယ်
အကိုနဲ့ခွဲရမယ်လို့ တွေးမိလိုက်တာနဲ့ ညီမနှလုံးသားတွေကွဲထွက်မတတ်ခံစားရပါတယ်။
ယောက်ျားမှန်သမျှ အသဲလိုက်ခွဲနေတဲ့ မင်းလို နှလုံးမလှတဲ့ မိန်းမတွေကို မုန်းတယ်ကွာ
သစ္စာမဲ့ အသဲစိမ်းတဲ့အလှဘုရင်မကြီးရေ မင်းထက်သစ္စာရှိတဲ့ အရက်ထဲမှာကိုယ့်အသဲကို စိမ်ထားလိုက်ပြီဟေ့
သူများ စာတွေဖတ်ပြီး ပွားကြည့်တာပါ
ဒါဆို အသည်းမာအောင်သင်ပေးပါဦး …
Hello Si-tone, when I read your article, I can’t help but wonder how you are feeling. if it isagood memory, keep it to last breath. Your love will last forever.
Sometimes, there isasacrifice for both good sake. Not only you,many people out there are living with the broken heart. For decade long, I have been keeping that memory which make me feel warmth whenever I think of. Here is my story writing in the hope to let her know my love.
When we both knew it was too late to be together, my heart was broken into pieces but I never try to mend. I left from Burma without saying good-bye to her. I had got her last letter asking me why I didn’t say good-bye. Yes at least I should have said good-bye. Last known was she also left from Burma.. I don’t know where she is by now. I have been searching for her in the help of Google people search, I want to say good-bye if I see her.. Near or far, wherever you are.